Hanks စေရန် Cone ချည်ခင် Winder စက် - တရုတ် Hanks စေရန် Cone ချည်ခင် Winder စက်ပေးသွင်း,စက်ရုံ -FEIHU
Hanks စေရန် Cone ချည်ခင် Winder စက်
အဆိုပါမော်ဒယ်ဓာတုဖိုင်ဘာများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်, ကြိုး, ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်ရှုပ်ထွေးဆလင်ဒါပိုက်အဖြစ်ကြိုး skein ,ပြည်နယ်. ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားအတူစက်တွေအဖြစ်; တစ်ဦးချင်းစီဗိုင်းလိပ်တံထိန်းချုပ်မှု; ရေနံအလိုအလျှောက်ပေါ်လာ; အစွန်း device ကို; ဆန့်ကျင်- -စုပုံထား; ချိုးကြိုး၏ Auto-မှတ်တိုင်; Fixed-အရှည်ထိန်းချုပ်မှု; စူပါ feed ကိုဝါယာကြိုး; ချိန်ညှိတွေနဲ့အနှေး -starting; ချည်ခင်မြန်နှုန်းချိန်ညှိဖြစ်ပါသည်; ချည်ခင်တင်းမာမှု-controlled device ကိုများနှင့်အခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာများ, စက်များ၏အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်:
တစ်ဦးက: ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကောင်းဖြစ်ပါသည်,ပိုကောင်းတဲ့,အကောင်းဆုံး,ကငြိမ်ဝပ်စွာနေပါစေဘယ်တော့မှ. & ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖြစ်ပါသည်. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းသင်တပြင်လုံးကိုဝယ်ယူမှုတိုးတက်မှုစဉ်အတွင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်.
လွန်ခဲ့သော : အလိုအလျောက်စည် Hanks စေရန် Cone(bobbin) ချည်ခင်အကွေ့အကောက်များသောစက်
နောက်တစ်ခု : တဦးတည်းမော်တာ Hanks စေရန် Cone ချည်ခင်အကွေ့အကောက်များသောစက်